"Renault लोगान": प्रतिस्थापन alternator बेल्ट, कारण र प्रभाव
कुनै पनि गाडी मा एक बिजुली छ। यो सम्पूर्ण वाहन प्रणालीमा बिजुली प्रदान गर्न प्रयोग गरिएको छ। जनरेटर क्रैन्कशाफ्ट चरखी को परिक्रमा गरेर, एक बेल्ट प्रसारण द्वारा संचालित छ। किनभने बिजुली र एक चरखी बीच ब्रेक जडान हरायो जब कि बेल्ट, एक प्रमुख भूमिका खेल्छ। कार अब बिजुली वर्तमान उत्पादित छ। त्यसैले, यो उनको हालत निगरानी र समय वस्तु परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। आजको लेखमा हामी एक कार "रेनो लोगान" प्रतिस्थापन alternator बेल्ट बनाउन कसरी हेर्न हुनेछ।
रोचक तथ्य: (कि एक ब्याट्री, छ) जनरेटर सञ्चालन बिना कार मा, तपाईं 100 किलोमिटर ड्राइव गर्न सक्छन्। त्यसैले अचानक बेल्ट dangling को समस्या तरिकामा तपाईं समातिए यदि तपाईं आफ्नो मा मरम्मत को स्थान प्राप्त गर्न समय छ।
निर्माता कार "रेनो लोगान" प्रतिस्थापन गर्ने दाबी alternator बेल्ट 60 हजार किलोमिटर भन्दा पछि छैन गरिनु पर्छ। यो दुवै 8 र 16-वाल्व इन्जिन लागू हुन्छ। यो ड्राइभ तत्व हरेक 15 हजार राज्य जाँच गर्न सिफारिस गरिएको छ।
चर्किएको वा sidewalls को जुदाई कार alternator बेल्ट प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक संकेत गर्दछ। "रेनो लोगान" छ 1.4 वा 1.6, यो कुरा छैन - समस्या सबै मोडेल लागि एउटै हो।
यो घटना को कारण के हो? को alternator बेल्ट शब्द को प्रतिस्थापन भन्दा पहिले दरार सुरु भएको छ भने, सम्भवत तपाईँले एक दोषपूर्ण वस्तु छन्। मूल उत्पादनहरु सम्पूर्ण आयु लागि डिजाइन। पनि यो तेल drips मुक्त हुनुपर्छ। यो रबर बेल्ट को गुण सबै भन्दा राम्रो तरिका छैन परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ। पछि यसलाई तोड्न सक्छ। अनावश्यक तेल कारण इम्बोस गरिएको छाप क्रैन्कशाफ्ट गर्न सतह मा पर्न सक्छ।
जाँचको समयमा तपाईं frayed ट्यागफेलापर्यो भने, यो भागहरु को अनुचित स्थापना संकेत गर्छ। अनुचित तनाव समस्या को मामला मा एक विशेषता सुसेली सँगसँगै हुनेछ। पालैपालो एक सेट संग ध्वनि परिलक्षित हुनेछ। सुसेली एक किनभने बिजुली पूर्ण क्षमता मा काम के छैन को, को चरखी संग संलग्नता कमी भन्छन्। वाहन विद्युत प्रणाली मा सम्भव भोल्टेज ड्रप।
तर कुनै पनि मामला मा, चर्किएको वा विरूपण को पत्ता लगाउने, वाहन प्रतिस्थापन alternator बेल्ट आवश्यक छ। त्यहाँ स्टीयरिंग र वातानुकूलन छ किनभने "रेनो लोगान" 1.6 धेरै अन्य स्थापना योजना छ। यी नोड्स पनि क्रैन्कशाफ्ट चरखी द्वारा संचालित छन्। हामी कसरी वातानुकूलन संग र बिना एक कार "रेनो लोगान" प्रतिस्थापन alternator बेल्ट बनाउन वर्णन तल।
शक्ति स्टीयरिंग र वातानुकूलन संग कार मा प्रतिस्थापन
अक्सर विकल्प संग "लोगान" को एक 1.6-लीटर 16-वाल्व संस्करण पाउन सकिन्छ। त्यसैले प्रतिस्थापन alternator बेल्ट कसरी उत्पादन गर्न हेरौं। "रेनो लोगान" एक सपाट छापिएको क्षेत्र मा सेट गरिएको छ। अर्को, तपाईं हुड र बोल्ट असर रोलर्स वोल्ट नट आदि खोल्नु गर्न प्रमुख 13 खोल्न आवश्यक छ। त्यसपछि, यो कोष्ठ निश्चित छ र बिजुली नियन्त्रक को आवास। अर्को, यो घन्टी हटाइएको छ र ड्राइव फलक। स्प्यानर तनाव रोलर disassembled। यो तत्व पनि यसको आफ्नै स्रोत छ भनेर याद (यो परिक्रमा अवधिमा हल्ला बनाउँछ भने, एउटा नयाँ यसलाई प्रतिस्थापन)।
कि पछि तपाईं सुरक्षित पुरानो बेल्ट हटाउन सक्नुहुन्छ। ध्यान दिएर निश्चित र कडा नयाँ तत्व रोलर कोष्ठ स्थापना अघि। थप ड्राइव घन्टी विस्फोट र उल्टो क्रममा संकलित। यो वातानुकूलन र GUR लागि प्रदान गरिन्छ कि ती स्थापना स्थान मा बेल्ट चरखी भ्रममा महत्वपूर्ण छ।5बिजुली विधानसभा मा प्रयोग गरिन्छ जबकि बाद दुई, छ प्रवाहको छन्।
शक्ति स्टीयरिंग र वातानुकूलन संग वाहन लागि निर्देशन
बेल्ट हटाउन, तपाईं tensioning चरखी फिक्सिंग दुई बोल्ट loosen गर्न आवश्यक छ। अर्को, तपाईं रोलर गर्न पट्टी अप उठाउनु आवश्यक छ। कि पछि तपाईं सुरक्षित बेल्ट निकाल्न सक्छन्। विशेषज्ञहरु स्थापना प्रक्रिया सरल बनाउन क्रममा, अगाडि बायाँ पाङ्ग्रा र प्लास्टिक सुरक्षा कवर वोल्ट नट आदि खोल्नु गर्न सुझाव दिन्छौं।
यसबाहेक, यो दुई pulleys स्थिति जाँच गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई माटो र धूलो कणहरु अस्वीकार्य छ। यो एक cliff पछि बेल्ट को delamination, हुन सक्छ। को चरखी तेल दाग पनि अस्वीकार्य छ। यस मामला मा, वस्तु एक नरम कपडा degreaser संग उपचार गरिएको छ। स्थापना संयन्त्र उल्टो अनुक्रम मा प्रदर्शन गरिएको छ।
वातानुकूलन र GUR बिना एक कार मा alternator बेल्ट प्रतिस्थापन
गरेको यो कार "रेनो लोगान" प्रतिस्थापन alternator बेल्ट मा बाहिर छ कसरी हेरौं। यसो गर्न, तपाईं तल जनरेटर बोल्ट छोड्न आवश्यक छ। पनि शीर्ष बोल्ट tensioner काता। अर्को, बेल्ट बाहिरी झिकिएको छ। नयाँ तत्व क्रैन्कशाफ्ट alternator चरखी मा चरखी देखि दिशा मा सेट गरिएको छ। त्यसपछि तपाईं इच्छित तनाव सेट गर्न आवश्यक छ। निर्माता 98 एनएम वा 10 किलोग्राम को एक आंकडा निर्दिष्ट गर्दछ। बस उपकरण बिना तनाव को स्तर निर्धारण। यो गर्न, विभिन्न बेल्ट बिन्दु (को pulleys र रोलर बीच बीचमा भाग मा) मा आफ्नो औंठी थिच्नुहोस्।
तत्व 6-8 मिलिमिटरमा पछिल्तिर भन्दा मोड पर्छ। बेल्ट थप sags यदि यो कडा गर्न आवश्यक छ। कसरी यसलाई के गर्ने? यो तल छलफल गरिनेछ।
आफ्नो हातले बेल्ट तनाव बनाउने
यो प्रक्रिया अलि फरक ट्रिम स्तर संग वाहन मा फरक छ। हावा कंडीशनिंग समायोजन संग "लोगान" स्वतः बाहिर छ पनि ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो वाहन को जलवायु प्रणाली संग सुसज्जित छ भने, बेल्ट तनाव निम्नानुसार हात द्वारा गरिन्छ:
को ट्रिम 5K **** (सिरियल नम्बर) को कोष्ठक सुरक्षित कि दुई स्क्रू कमजोर। को समायोजन सदस्य को मद्दत यसको ठाउँमा फिर्ता गरिएको छ। को निर्धारण बोल्ट स्थापना पछि फेरि कडा छन्। काम एक एलन प्रमुख संग गरेको छ।
को ट्रिम *** 4RK माथिल्लो बन्धन स्क्रू कडा छ। आवश्यक भएमा तनाव जाँच पछि, फेरि कमजोर। पछिल्लो पालो मा तल स्क्रू twists।
त्यसैले हामी कसरी वातानुकूलन संग र बिना एक कार "रेनो लोगान" प्रतिस्थापन alternator बेल्ट बनाउन बाहिर समझ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, प्रक्रिया सरल छ र पनि शुरुआती गर्ने शक्ति। हामी आशा यो पुस्तिका तपाईं यस विषयमा मदत गरेको छ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा सबै भन्दा चोरी कार के हो?
2109 मा कार्बोरेटर कसरी समायोजन गर्ने? योजना VAZ 2109. भएको कार्बोरेटर VAZ
मित्सुबिशी L200 पिक-अप
माइक्रोवेव भित्र कसरी टिप्स र चालहरू धो
फोनोग्राम एक ध्वनि रेकर्डिङ हो
ठोस मोर्टार एकाइ। मोबाइल कंक्रीट प्लान्ट
अर्डरको माल्टा र यसको शूरवीरहरू
निलम्बित छत - तपाईंको आफ्नो हात कसरी बनाउने?
Pies लागि खमीर आटा
कसरी तपाईंको व्यापार को लागि अफशोर खोल्नुहोस् गर्न
अवलोकन, विशेषताहरु: माइक्रोमैक्स क्यानभास स्पार्क Q380 समीक्षा। सेलफोन
कसरी आफ्नो फोन अनलक गर्न सैमसंग: व्यावहारिक सुझावहरू